ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ‘ဗမာမွတ်စလင်’ကွန်ဖရင့်တွင်ပြောကြားခဲ့သည့် သဘာပတိဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏မိန့်ခွန်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Asean conference on Rohingya crisis
ထို့ပြင် ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက် ‘မဟာဗန္ဓုလ’စစ်သူကြီး အင်္ဂလိပ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်သည့် ပထမစစ်ပွဲတွင်လည်း တို့ဗမာမွတ်စလင်မ်တို့ ရဲမက်စစ်သည်တော်အဖြစ် စစ်မှုထမ်းခဲ့ကြသည်။ တို့ဗမာ မွတ်စလင်မ်တို့သည် စစ်ရေးစစ်ရာ၌ နှစ်ပရိစ္ဆေဒအဓွန့်ရှည်ကြာစွာ အခါသမယမှ ရင်းနှီးဆက်ဆံလေ့လာလိုက်စား ၀ါသနာထုံခဲ့သည်ကို ရာဇ၀င်တွင် ထင်ရှားခဲ့သည်သာမဟုတ် သာဓကအထူးလိုငြားအံ့ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကိုရှုလော့။ တို့ဗမာမွတ်စလင်မ်တို့ ယခုတိုင်နေထိုင်ကြသည့် ရပ်ကွက်များ၏အမည်မျးကို ဆင်ခြင်သည်ရှိသော် မြန်မာမင်းတို့၏ အမြောက်တပ်ကို စီးနင်းအမှုထမ်းခဲ့ကြသူ အမြောက်တပ်သားများနေရာ အမြောက်တန်းဖြစ်သည်။ ဘုရင့်ဗုံးတပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သည့် ဗုံးတပ်သားမျာဖြစ်ကြ ကုန်သော တို့ဗမာမွတ်စလင်မ်တို့သည် ဗုံးအိုးရပ်၌နေကြ၏။ တို့ဗမာမွတ်စလင်မ်များနေကြသော စင်္ကြာနွယ်စဉ်အရပ်ကား စင်္ကြာအမြောက်တပ်သားများနေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်၏။ မြန်မာဘုရင်များ ယုံကြည်သဒ္ဒါတော်မူခြင်းတည်းဟူသောဂုစ်ကို ရရှိခဲ့၍ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ အသက်စည်းစိမ်ကို သက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ခန့်ထားသနားတော်မူခြင်းကို ခံစားကြရသော ကိုယ်ရံတော်ဗိုလ်မှူးများဖြစ်ကြကုန်သော တို့ဗမာမွတ်စလင်မ်များ၏နေထိုင်ရာအရပ်သည် ကိုယ်ရံတော်ဟု ယခုတိုင် ထင်ရှားရှိ၏။
နိဂုံးချုပ်ပြောလိုသည်ကား မြန်မာပြည်အတွင်း အယူဝါဒကွဲပြားခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ လူမျိုး၏စည်းလုံးမှု၊ တိုင်းပြည်၏တိုးတက်မှု ချမ်းသာမှုကို မပျက်စီးစေရာ၊ သဘောထားကြီးခြင်း၊ တိုင်းပြည်ကိုချစ်ခြင်း စသော မေတ္တာတရားတို့ဖြင့် လူမျိုးစည်းလုံးမှုကိုဖြစ်စေလျက် ငါကား သူနှင့်မတူ သီးခြားလူမျိုးဟူသော စိတ်ထားကို တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် ဖိနှိပ်ထားရာသည်။ ငါတို့သည် လူမျိုးအားဖြင့် မြန်မာ၊ ဘာသာအားဖြင့် “မွတ်စလင်မ်”၊ နေထိုင်ရာဌာန မြန်မာပြည်၊ သယ်ပိုးရန်ကိစ္စ မြန်မာ့အကျိုးဟူ၍ စွဲစွဲလန်းလန်းကြိုးစားကြရန်ဖြစ်၏။
(၁၉၄၁-ခု၊ မေလ(၄)ရက်နေ့ နံနက် ၉-နာရီ ၁၅-မိနစ်)အချိန်၌ ယင်းတော်ရွာကြီးတွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ‘ဗမာမွတ်စလင်မ်’ကွန်ဖရင့်အစည်းအဝေးသို့ပြောကြားခဲ့သော သဘာပတိ မန္တလေးမြို့ အမျိုးသားကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးAရာဇတ်၏ မိန့်ခွန်း(စ-ဆုံး)။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗမာမွတ်စလင်မ်ကွန်ဖရင့်(ယင်းတော်)မှတ်တမ်းမှ ကောက်နှုတ်သည်။
Tags: Martial Race
This entry was posted on July 21, 2012 at 3:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ‘ဗမာမွတ်စလင်’ကွန်ဖရင့်တွင်ပြောကြားခဲ့သည့် သဘာပတိဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏မိန့်ခွန်း”
July 9, 2014 at 2:47 am | Reply
ငါတို့က မင်းတို့ကိုမမုန်းပါဘူး။ဒါပေမယ့် မင်းတို့လုပ်ရပ်တွေက လူမဆန်ဘူး။တောင်းဆိုမူတွေက များနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိရဲ့လား။သူလဲချိပ်ကောက် ကိုယ်လဲချိပ်ကောက် ဆိုရင်ချိပ်မိနေမှာပဲ ကိုယ့်ဘက်က ချိပ်ဖြောင့်ဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားပါ။မင်းတို ညီလာခံပြောသလို ဗမာဖြစ်ချင်ရင် ဗမာလို့သုံးနှုန်းချင်ရင် ကိုယ်ကအနေအထိုင်တက်တက်နဲ့နေတက်ရမယ်။နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အလောင်းဘုရားတပ်တော်မှာဗမာအတွက်အမှုတောထမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမယ့် သုများကျေးဇူးကိုသာပြောပါ ကို့ကျေးဇူးကို ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အတိုင်းကျင့်သုံးပါ။
LeaveaReply to mannikal Cancel reply